के हो मिलिया ? कसरी बच्ने ? - Health Today Nepal
के हो मिलिया ? कसरी बच्ने ?
June 20th, 2019 स्वास्थ्य सुझाब0comments
काठमाडौ,असारः आँखा, नाक, गाला वरपरको भागमा पिप नभएको सेतो, पहेंलो बिमिराजस्तै कडा दाना अर्थात बिमिरालाई मिलिया भनिन्छ । यसले खासै दुःख नदिए पनि सौन्दर्यमा भने असर पु¥याएको हुन्छ । यसको कुनै खास नेपाली नाम छैन तर अंग्रेजीमा यस्ता बिमिरालाई ‘मिलिया’ भनिन्छ । यो छालाको समस्याका कारण आउने गर्छ । यसलाई मिल्क स्पट र आयल सिडसमेत भनिन्छ ।
यो धेरैजसो आखाँको तल, नाक, गाला, निधार र छातीमा आउने गर्छ । मिलिया खतरनाक स्थिति नभएको र यो स्वास्थ्य समस्या नभई सौन्दर्य समस्या भएको छाला रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञले बताएका छन् । चिकित्सकका अनुसार यसको कुनै उपचार छैन र आत्तिनु पर्ने आवश्यक पनि छैन् । तर सौन्दर्य प्रभावित हुन लाग्दा केही चिकित्सकीय प्रक्रिया भने अपनाउन सकिन्छ । चिकित्सकका अनुसार मिलियाले तैलीय छाला भएकाको दाँजोमा सुक्खा छाला भएकालाई बढी प्रभावित गर्छ ।
यो करिब १ देखि २ मिलिमिटरको सेतो छालाको दाना हो । यो सेतो दाना (बिमिरा) जस्तै छालामा देखिन्छ । यो केराटिनको कारणले हुन्छ । जो छालाको सतहभन्दा मुनि फस्छ । यो हाम्रो स्वास्थ्यका लागि घातक हुँदैन । केराटिन मानव शरीरमा पाइने यस्तो प्रोटिन समूह हो, जसले रौं, छाला र नङको निर्माण हुन्छ । सामान्य भाषामा भन्ने हो भने, जब छालाको मृत कोषिका छालामाथि आउँछ तब यसैले मिलियाको रूप लिन्छ ।
मिलिया अनुहारमा देखिने हाइट हेड हैन । यो हाइट हेडभन्दा फरक हुन्छ । हाइट हेडमा पिप हुन्छ तर यो पिपले भरिएको हुँदैन । दानाजस्तै हुने यो बिमिरा कुनै पनि उमेरमा हुन सक्छ । तर यो समस्या सबैभन्दा बढी बच्चा र त्यसपछि युवामा देखिन्छ ।
हेर्दा अनुहार भद्दा लाग्ने, यो समस्या उपचारबिना समेत समाप्त हुन्छ । तर यदि मिलियालाई आफ्नो अनुहारको लागि समस्या नै भएको ठाने छाला रोग विशेषज्ञसँग परामर्श लिनसकिन्छ । मिलियालाई बिमिरा, डन्डीफोर, दाना आदिको श्रेणीमा राख्न सकिदैन । यो मृत कोषिकाले गर्दा हुने भएकाले आफैं केही सातामा निको हुन सक्छ ।
केही साताको उपचार प्रक्रियाबाट समेत मिलिया निको नहुँदा डर्मेटोलजिस्टले एक विशेष चिकित्सकीय प्रक्रियाअन्तर्गत यसलाई सुईको माध्यमले छालाबाट बाहिर निकाल्ने गरेका छन् । यति मात्र नभई मिलियालाई हटाउन क्रायो थेरापी (उपचार प्रक्रियाअन्तर्गत अत्यन्त चिसो उपयोग गर्नु) समेत गरिन्छ । यसलाई चिथोर्ने वा आफैंले निकाल्ने प्रयास गर्नु हुँदैन । चिथोर्दा यसले समस्या दिन सक्छ । चिथोर्दा, कोट्याउँदा यसले छाला पोल्नुको साथै चिलाउने समस्या वा संक्रमणसमेत हुन सक्छ । यति मात्र नभई यसले गर्दा छालामा दागसमेत बस्न सक्छ ।
करिब आधा जति नवजात शिशुको अनुहारमा मिलिया विकसित हुन्छ तर यो जन्मको केही सातापछि आफैं निको हुन्छ । वयस्कमा छालाको कुनै पनि प्रकारको चोटको परिणामस्वरूप मिलिया हुन सक्छ । यो छालालाई निको पार्न विकसित भएको हुन सक्छ । धेरैजसो व्यक्तिमा मिलिया हुने कुनै चिकित्सकीय कारण हुँदैन । यसको उपचारका लागि मिलिया हुने कारण खोज्नुपर्छ । छाला रोग विशेषज्ञले शरीरमा मिलिया हुने कारण पत्ता लगाएर यसबाट उन्मुक्ति दिन सघाउछन् ।
यसबाट बच्ने सामान्य उपाय–
प्रत्यक्ष घामबाट अनुहार जोगाउने
खासै बढी वैज्ञानिक प्रमाण नभए पनि सूर्यको हानिकारक किरणले मिलियाको समस्यालाई झन् बढाउने स्थिति देखिएको छ । मिलिया प्रभावितले अनुहारलाई सूर्यको हानिकारक किरणबाट जोगाउने फाइदाजनक हुनसक्छ ।
बढी मेकअप नगर्ने
मिलियाग्रस्त महिलाले यसलाई लुकाउन अनुहारमा बढी कस्मेटिकको उपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । कस्मेटिक उत्पादनले अनुहारको छालाको रोम छिद्रलाई बन्द गर्छ । यसले छाला बढी प्रभावित हुनुको साथै मिलियामा समेत बृद्धि देखिनुको साथै छालाको अन्य समस्यासमेत देखिन सक्छ ।
अनुहारलाई न्यानो तौलियाले सेक्ने
तातो पानीमा तौलियालाई भिजाएर यसलाई निचोरेर अनुहार छोप्दा फाइदा पुग्छ । यो अनुहारमा बाफ लिनु जत्तिकै फायदाकारी हुन सक्छ । यसले गर्दा अनुहारको छालाको बन्द भएकोरोमछिद्र खुला हुन्छ र अनुहारको छालाको मृत तहसमेत निस्किन्छ ।
छाला सफा राख्ने
मिलिया तैलीय छालाको दाँजोमा सुक्खा छालालाई बढी प्रभावित गर्ने पाइएको छ । सुक्खा छालाको कोषिका सहजै छालाको माथिल्लो तहसम्म आउँछ । यसैले दिनहुँ अनुहारलाई पानीले सफा राख्नुपर्छ । यसले छाला ‘हाइड्रेटेड’ रहनुको साथै सफासमेत हुन्छ ।
Previous article असार ६ गते अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइने
Next article ८ महिनादेखि बिग्रिएको ट्रमा सेन्टरको मेसिन मर्मत गर्न सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण